Nyocha na ndetu ọrịa na-efe efe. COVID-19 na-eme ka ụwa maa jijiji - Ikkaro
Inicio >> Akwụkwọ >> Ọgbaghara. COVID-19 na-eme ka ụwa maa jijiji
Ọgbaghara. COVID-19 na-eme ka ụwa Slavoj Zizek maa jijiji
Azụrụ m ma gụọ edemede a mgbe e bipụtara ya na Mee, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite nke ọrịa ahụ. Achọrọ m ịgụ Zizek ma echere m na emewo m akwụkwọ na-ezighi ezi ịbịaru ya nso. Ma ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya na ọ bụ akwụkwọ ahụ ọ bụghị onye edemede.
Ihe omimi m gwara m nke ahụ Ọ bụghị ezi echiche ịgụ akwụkwọ gbasara COVID-19 na oria ojoo a na mbido ya. O nwere akara ngosi niile nke ịbụ onye na-atụtụ ego. Mana n'aka nke ọzọ echere m na m sitere na onye ọkà ihe ọmụma ama ama m ga-achọ inweta ihe dị mma. M ka na-eche na ọ ga-ekwe omume imepụta ezigbo ikpe ọbụlagodi ụbọchị mbido ọrịa a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị dabere na ihe merenụ, ee site na inyocha ọnọdụ dị iche iche, ọdachi ndị gara aga, wdg.
Nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ a abụwo nnukwu ndakpọ olileanya na Anaghị m akwado onye ọ bụla. Fọrọ nke nta ka egwuregwu.
Ọ dị ka ịgụ Twitter. Akwụkwọ dị mfe, agụọla m njakịrị niile pụtara na Twitter na obere esemokwu karịa na netwọkụ mmekọrịta. N'eziokwu, n'ime echiche ole na ole ọ hapụrụ, ọ nweghị nke a na-arụ ụka, ọ tụpụrụ ha. Nkwupụta dabere na data ezighi ezi, na-enweghị eri, na-enweghị ebumnuche doro anya.
Ọ bụkwa eziokwu na o si n’ọgụgụ Nnwere onwe nke Ludovico Geymonat na ihe dị iche bụ abysmal. N'akwụkwọ Geymonat ị hụrụ usoro, nhazi, esemokwu na ebumnuche doro anya nke ihe ọ chọrọ igosipụta ma ọ bụ ịtụgharị uche….
Inweta ihe oma m na-akwado gị gịnị bụ ebumnuche nke ụkpụrụ omume?
Ọ bụ naanị ọkụ
Enwere echiche, nke o kwuru n'akwụkwọ ahụ na ugbu a ọ ga-abụ ihe nzuzu ịkọwa ha dịka "ọ bụ naanị oke ọkụ." Ihe ndị a bụ ihe ikekwe na mbido oria ojoo a enwere ike iche na ọ bụ ikpe. Ma nke a bụ ụzọ na-ezighi ezi iji gbalịa iji nyochaa data metụtara ọrịa na-efe efe site na mmalite nke ọrịa a, karịa ịnwa inyocha nsogbu omume ma ọ bụ nkà ihe ọmụma metụtara ọrịa na-efe efe na nnukwu ọdachi.
Ozi nke ịbọ ọbọ, dị ka a ga-asị na ọ bụ chi ezi omume, na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya. Mgbanwe nke chi site na okike. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ụdị ọrịa a na-emetụta nnukwu nsogbu nke ụmụ mmadụ, ọrịa a bụ ihe ndapụta, ihe ọghọm ma ọ bụ okooko osisi. Ọ bụghị ihe emere tupu oge eruo nke okike iji weghachi nhazi ma gwọọ ụwa.
Ikekwe nke a bụ ihe kachasị emetụ n'obi anyị nwere ike ịmụta site na ọrịa na-efe efe ugbu a: mgbe okike na-awakpo anyị na nje, ọ na-eme iji weghachite ozi nke anyị. Na ozi bụ: ihe i mere m, m na-eme gị.
Akwụsịrị m ikwu ihe niile na-adịghị m mma, hapụ ya mgbe niile, na-ekwu ihe ndị dọọrọ mmasị m ma ọ bụ na m chọrọ inyocha ihe.
Ndetu na-akpali mmasị
Kedu ihe ị pụtara site na memes ndị a?
Richard Dawkins ekwuola na memes bụ "nje virus nke uche," ndị parasiti nke "na-achịkwa" uche mmadụ, na-eji ya dị ka ụzọ isi na-amụba, echiche nke na-esiteghị na Lev Tolstoy.
Ethkpụrụ omume ọma na nlekọta nke ndị agadi na ndị isi ike
Na nkenke, ozi ya bụ na anyị ga-ebelata ogidi nke ụkpụrụ omume mmekọrịta anyị: ilekọta ndị agadi na ndị isi ike. Hastali ekwuolarị na ọ bụrụ na ihe aka njọ, ndị gafere afọ iri asatọ ma ọ bụ na-arịa ajọ ọrịa tupu oge eruo ga-ahapụ onwe ha. Anyị kwesịrị ịghọta na ịnakwere mgbagha nke "ịdị ike nke ndị kachasị ike" na-emebi ọbụna ụkpụrụ nke ụkpụrụ omume agha, nke na-agwa anyị na mgbe agha ahụ gasịrị, anyị ga-ebu ụzọ lekọta ndị merụrụ ahụ nke ukwuu, ọbụlagodi mgbe ohere ịzọpụta ha pere mpe. Iji zere nghọtahie ọ bụla, achọrọ m ịkpọsa na m na-eche n'eziokwu: anyị kwesịrị ịkwadebe ọgwụ ka ndị na-arịa ọrịa nwere ike ịnwụ n'enweghị ihe mgbu, iji chekwaa ahụhụ na-enweghị isi. Mana ụkpụrụ mbụ anyị ekwesịghị ịbụ ịba ụba, kama inye enyemaka na-enweghị atụ, n'agbanyeghị mmefu, ndị chọrọ ya, iji mee ka ha dịrị ndụ.
Ibu ọrụ nke ụlọ na nke ụlọ ọrụ
N’ụbọchị ndị gara aga, anyị anụla ugboro ugboro na onye ọ bụla n’ime anyị ji ọrụ n’aka n’onwe ya nakwa na anyị ga-agbaso iwu ọhụrụ. N'ebe mgbasa ozi, anyị na-achọta akụkọ bara ụba nke ndị na-emezighị ... omume.
Chascarrillo na Trump na socialism
Dị ka okwu a si kwuo: na nsogbu anyị niile bụ ndị na-elekọta mmadụ. Ọbụna ụda na-atụle ugbu a ụdị Universal Basic Income: ego maka $ 1000 maka nwa amaala ọ bụla toro eto. A ga-emefu ọtụtụ ijeri na-emebi iwu ahịa ahịa niile.
Na ozi nke ịhapụ ndị agadi nọ na America
Naanị oge na-adịbeghị anya na ihe yiri nke ahụ mere, na m maara, na afọ ndị ikpeazụ nke ọchịchị Ceausescu na Romania, mgbe ụlọ ọgwụ anabataghị nnabata ndị lara ezumike nka, n'agbanyeghị ọnọdụ ha, n'ihi na ha emeghị ha nke abaghị uru ọ bụla. Ozi nke nkwupụta ndị a doro anya: nhọrọ ahụ dị n'etiti nnukwu ndụ mmadụ na ụzọ ndụ nke ndị America (ya bụ, onye isi ike). Na nhoputa ndi ochichi a, ndu mmadu na-efu. Ma nke a ọ̀ bụ nanị nhọrọ?
Oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ọnọdụ nke ndị na-ahụ nsogbu dị ka oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ike steeti ga-arụ ọrụ ya ma anyị na-agbaso ntuziaka ya na-atụ anya na a ga-eweghachite ụdị ụfọdụ nke iwu n'oge adịghị anya n'ọdịnihu bụ mmejọ. Anyị kwesịrị ịgbaso Immanuel Kant ebe a, bụ onye dere n'ihe metụtara iwu obodo: "Rube isi, mana chee, debe nnwere onwe nke echiche!" Taa anyi choro karie mgbe obula Kant kporo "iji uche eme ihe n'ihu oha."
Ntughari akwukwo nke akwukwo nke masiri m
Jane Bennett, Vibran Ihe. A na-akpọ ya ndị hụrụ ihe ọhụrụ n’anya
Martien Mueller, "Nzukọ na ndị na-eme ihe nkiri-netwọkụ: thtụgharị uche n'ihe ike mmekọrịta ọha na eze, Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị na Ohere", e hotara na http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gec3.12192/pdf
Ryszard Kapuściński, The Shah ma ọ bụ ngafe nke ike, Akaụntụ nke mgbanwe Khomeini na Iran
Iweghachi akwụkwọ ochie
Otuto nke nwayọ nke Carl Honoré
Mmegbu nke nkwurịta okwu site na Ignacio Ramonet
1 Ọ bụ naanị ọkụ
2 Nature usiene
3 Ndetu na-akpali mmasị
4 Ntughari akwukwo nke akwukwo nke masiri m